Fariin uu diray Neymar Jr oo rajo galineysa kooxda Real Madrid – Gool FM
Fariin uu diray Neymar Jr oo rajo galineysa kooxda Real Madrid
Dajiye May 24, 2019
(Yurub) 24 Maajo 2019. Maamulka kooxda Paris-Saint-Germai ayaa dhexda kaga jira xaalad walaac iyo jahawareer ee ku saabsan fariimaha aan cadeyn ee la xiriira labadeeda xiddig ee kala ah Neymar Jr iyo Kylian Mbappé.
Waxaa sii xoogeysanaya wararka xanta ah ay warbaahinta kaga hadlayaan in xiddigaha Neymar Jr iyo Kylian Mbappé ay suuragal tahay bixitaankooda suuqa xagaaga ee soo socda.
Hadaba Neymar Jr ayaa hadal uu dhawaan ka dhawaajiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan isku arkaa inaan ahay qof geesi ah ee jecel inuu la kulmo caqabado cusub”.
“Geesinimada waa erey si sax ah u qeexaysa sifooyinka ku saabsan dabeecadeyda iyo xirfaddayda, waxay i siineysaa rabitan ah inaan ka hor tago isla markaana aan ka gudbo caqabadaha noloshayda ku hor gudban”.
“Waan ogahay inay jiraan caqabado kale ee i sugaya aniga, laakiin geesinimada ayaa mar walba iga dhigeysa mid dhameystiran”.
Yeelkadeeda, wargeyska “Mundo Deportivo” ee gobolka Catalonia ayaa tilmaamay in fariintan ay la xiriirto safarka Neymar Jr uu ugu kicitamayo dalkiisa hooyo, si uu qeyb kaga noqdo diyaar garowga xulkiisa Brazil, isagoo aan wax fasax ah ka qaadanin macalinka kooxda PSG ee Thomas Tuchel taasoo si xoogan kaga careysiisay.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Real Madrid ay ka faa’iideysan karto dhibaatada ka dhex taagan kooxda PSG sanadkan, si ay ula saxiixdaan midkood xidigaha Neymar Jr iyo Kylian Mbappé.
Messi oo iska indho tiray Griezmann, xili sidoo kale uu ka hadlay aragtidiisa kaga aadan hadii uu kooxda ka tagayo Valverde
Kooxda Real Madrid oo war layaab leh heleysa kaddib markii la shaaciyey inuu ka tagayo kabtankooda Sergio Ramos